खटिए कर्मचारी, बाक्लियो सुरक्षा - Pradesh Today
Homeफिचरखटिए कर्मचारी, बाक्लियो सुरक्षा
दाङ, १२ मंसिर । दाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबार कर्मचारी मतदानस्थलमा पुगेका छन् । जिल्लाका ३४ स्थानमा तोकिएका मतदानस्थलमा कर्मचारी खटाइएको हो । निर्वाचन आउन तीन दिनमात्रै बाँकी रहदा कर्मचारीलाई खटाएको हो ।
८२ मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, एक सय ६४ जना सहायक कर्मचारी र अन्य गरी सात सय ३६ जना कर्मचारीहरू खटिएका हुन् । निर्वाचनका लागि तयारी गर्न उनीहरूलाई मतदानस्थलमा खटाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
‘चार सय १० जना कर्मचारी र तीन सय २६ जना स्वयम्सेवक खटाएका छौँ, मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले भने– ‘निर्वाचनको लागि कर्मचारीहरू पूर्वरूपमा खटिसकेका छन् । राजनीतिक दल, स्थानीय, समाजसेवीसँगको सहकार्यमा निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनका लागि निर्देशन दिइएको मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबीच उपनिर्वाचन हुने ३४ वटा मतदानस्थलको कमाण्ड प्रहरी नायव निरीक्षकको कमाण्डमा खटिएको छ । मतदानस्थलको सुरक्षा र निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनका लागि प्रहरीको सुरक्षा मजबुद बनाइएको दाङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचनको समयमा दुई हजार सुरक्षाकर्मी खटाएको छ ।
८० लाख बजेट
जिल्लामा हुने उपनिर्वाचनका लागि ८० लाख रूपैयाँ आएको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्लामा हुने खर्चका लागि ७९ लाख ९७ हजार रूपैयाँ पठाएको हो । तालिम, गोष्ठी, प्रचार, कर्मचारी तलब, भत्तालगायतका क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिने जनाइएको छ ।
कर्मचारी भत्ता ६३ हजार, अन्य भत्ता दुई लाख १३ हजार, पानी तथा बिजुली १० हजार, ईन्धन ३० हजार, मर्मत सम्भार २५ हजार, कार्यालय खर्च एकलाख ३० हजारको अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रम खर्च ७४ लाख ४१ हजार, भ्रमण खर्च ३० हजार, विविध खर्च १५ हजार र घर भाडा ३० हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी रकम प्राप्त भएको निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
७३ हजार मतदाता
दाङमा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि ७३ हजार मतदाता रहेको छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार उपनिर्वाचन हुन लागेको दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा रहेका जम्मा ७३ हजार एक सय ७२ मतदातामध्ये ३७ हजार तीन सय पाँचजना मतदाता रहेका छन् ।
जसमा ३५ हजार ८ सय ६६ पुरूष मतदाता रहेका छन् । तेस्रो लिंगी एकजना रहेका छन् । उनका अनुसार दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा ७ हजार ९ सय १ महिला र ७ हजार ७ सय १५ पुरूष गरी १५ हजार ६ सय १६ मतदाता रहेका छन् ।
शान्तिनगर गाउँपालिकामा ९ हजार २ सय ८३ महिला र ८ हजार ८ सय २० पुरूष गरी १८ हजार १ सय ३ मतदाता रहेका छन् । त्यस्तै बबई गाउँपालिकामा ९ हजार ५ सय ११ महिला र ९ हजार ३ सय ३८ पुरूष गरी १८ हजार ८ सय ४९ मतदाता रहेका छन ।
तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाको वडा नं. १, २, १० र ११ मा ८ हजार १ सय ६५ महिला र ७ हजार ९ सय ५ पुरूष तथा १ जना तेस्रो लिङ्गी गरी १६ हजार ७१ मतदाता रहेका छन् । त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ मा २ हजार ३ सय ६५ महिला मतदाता रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।